Factory Products - Shiinaha Products-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Koodhka baalashka wan ee la tolay
Goon casaan ah tulle
Snowflake wuxuu maydhaa jaakadaada denim
Snowflake wuxuu dhaqaa dharkaaga ...
Xulashada midabka, waxaan nahay khibrad badan. Xilligan ， waxaan doorannaa midabka ugu caansan uguna aasaasiga ah si aan u siino macaamiisha xulashooyin kala duwan. Dharka dhogorta jilicsan ee diiran oo diiran ayaa ah xulasho wanaagsan xilliga qaboobaha. Waxaan u isticmaalnaa 260g dhar jirka ah oo leh 210T daaha iyo midabka laba laabka ah 2 × 2 feedhka iyo cidhifka. Saamaynta muuqaalku waa mid aad u fiican, sidoo kale qiimahayaga awgood ， waxay noqon doontaa mid ka mid ah iibkeennii ugu fiicnaa xilligan. QAYBTA: 2-8 Sano
Waxaan Disney noo fasaxnay sanado badan inaan soo saarno alaabada Disney, inta badanna ay kujiraan dharka gabdhaha iyo wiilasha.
Waxyaabaha Denim waa alaab aad u tartan badan annaga. Waxaan haynaa amarro badan oo denim ah oo soo saara sanadka oo dhan oo waliba naga dhigaya inaan tartan weyn ku leenahay dharka iyo shaqada. Jaakadan denim madow, waxaan u adeegsanaa denim culus CVC 10.5 oz, oo ka bilaabma wiilasha dhallaanka ilaa wiilasha waaweyn oo leh baraf dhaqida barafka qurxoon iyo naqshadeynta hoody, taas oo ah qaab caan ah xagaaga.
Dharka gabdhaha waa iibiyaha ugu fiican xagaaga sidoo kale waa mid ka mid ah wax soo saarkeena ugu muhiimsan. Waxaan xulanay oo adeegsanay dhar chiffon ah si aan uga dhigno qaybta kore ee dharka oo ah laab-adkaysi iyo ku habboon xagaaga. Qaybta gogosha waxay ka samaysan tahay laba lakab oo ah dhar mas ah oo leh goono billow ah oo dabiici ah oo caqli badan. Dahaadhku wuxuu ka samaysan yahay hal funaanad T / C ah oo ku habboon in lagu xidho meel u dhow jidhka. Waxaa jira batoonno yaryar oo khaas ah oo loogu talagalay dhabarka dambe ee qoorta taas oo fududeyneysa in lagu xiro
Qolka615-620, No. 304 West Zhongshan Rd, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha